Mobile House: အဆင်ပြေ ဆုံး huawei c8650 root လုပ်နည်း
အဆင်ပြေ ဆုံး huawei c8650 root လုပ်နည်း
Recovery အရင် ခေါ် ရပါမယ် ။
ဖုန်းကို အရင်ပိတ်လိုက်ပါ ။ပြီးရင် Volume - ( အသံ လျော့ ခလုပ် ) + Power ခလုပ် ကို တွဲ ပြီး ဖိနိုပ် ထားပါ ။ စက်ဖွင့် လာပြီး လိုဂို မှာရပ်နေတဲ့ အထိ ဖိနိုပ်ထားပါ် ။
ပြီး ရင် ဒေါင်းထားတဲ့ zip ဖိုင် ကိုဖြည် လိုက် ပါ ။ အဲ့ ထဲ မှာ C8650 Recovery v2.1 နဲ့ update.zip နှစ်ဖိုင် ထွက်လာပါမယ် ။
အဲ့ ထဲ က C8650 Recovery v2.1 ကိုဖွင့် ထားပါ။ပြီး ရင် USB ကြိုးနဲ့ ကွန်ပြူတာ နဲ့ ဖုန်း ကို ချိတ်လိုက် ပါ ။
ပြီးရင် စောစော က ဖွင့် ထားတဲ့ C8650 Recovery v2.1 မှာ Enter ခေါက်ပေးလိုက် ပါ သူဘာသာ လုပ် ပြီး စက်ပိတ်သွားပါမယ် ။ခဏ နေ လို့ ထိ မပိတ် ရင် တော့ ဓာတ်ခဲ ထုတ် ပြီး ၅ စကန့် လောက် စောင့် ပြီးဓာတ်ခဲပြန်ထည့် ပါ ။
ပြီးရင် ဖြည်ထားတဲ့ ဖိုင် ထဲ က update.zip ကို မဖြည် ပဲ Memory card အသစ် သို့မဟုတ် အဟောင်းကို Formet ချ ပြီး မှ ကဒ် ထဲ ကို ကူးထည့် လိုက် ပါ ။ပြီးရင် Volume + ( အသံ ချဲ့ ခလုပ် ) + Power ကိုဖိနိုပ်ထားပါ ။ Recovery menu တက်လာ ပါမယ် ။
အဲ့ မှာ အပေါ် အောက် ရွှေ့ ဖို့ ကို Volume + & volume - နဲ့ လုပ်ပါတယ် ။၀င် ဖို့ ကိုတော့ power ခလုပ် နဲ့ ၀င်ပါတယ် ။
တရုတ်စာတွေထဲ မှာ English လို update.zip ဆို တာလေး မြင်ရပါမယ် အဲ့ ထဲ ၀င်လိုက် ပါ ။ပြီး ရင် ဖုန်း ရဲ့ Touch ပေါ်
က back key (နောက် ဆုတ် တဲ့ ခလုပ်) ဘေး က မှန်ဘီလူးပုံလေး ကို နိုပ် လိုက် ရင် ကိုယ် ထည့် ထားတဲ့ update.zip ကို ထပ်တွေ့ ရပါမယ် ။အဲ့ ဒါကို power ခလုပ် နဲ့ ရွှေး ပေးလိုက် ပါ ။သူဘာ သူ root ဖြည်ပြီး စက် ပြန် တက် လာ ပါ မယ် ။
မတက် လာ ရင် တော့ ကိုဘာ ကို ဓာတ်ခဲ ထုတ် ပြီးပြန်ထည့် ဖွင့် လိုက် ပါ။ ပွင့် လာ ရင် super user ဆို တဲ့ အရိုးခေါင်းပုံ application ကို တွေ့ ရပါမယ် ။
အဲ့ ဒါဆို root ဖြည်လို့ ပြီးပါပြီ ။
Posted by Mobile House at 9:55 AM
phay kham September 28, 2012 at 7:40 PM
c8800 ကိုလုပ်တာ ကွန်ပျူတာနဲ. ချိတ်တဲ့အချိန် ကွန်ပျူတာကမသိဘူးဖြစ်နေတယ်...အဲဒီ RECOVERY V2.1 က c8800 ကိုအလုပ်မလုပ်လို. လား။ enter ခေါက်လဲမထူးဘူး..စက်ကပိတ်မသွားဘူး။
Mobile House September 28, 2012 at 10:31 PM
ကိုက် ပါ တယ် ။ driver မသိ လို့ ပါ . 91 pc suit for android ..exe နဲ့ ချိတ် ပြီး driver download လုပ် ပါ . ကွန်ပြု တာ ဆိုင် ရာ ဖုန်း ဆော့ဝ် ထဲ မှာ ရှိ ပါတယ် .
targyi October 11, 2012 at 3:06 AM
download မရတော့ပါ။site ညွှန်းပေးကြပါ
Mobile House October 11, 2012 at 5:16 PM
ဒေါင်းလို့ ရပါတယ် ။ ကွန်နက်ရှင်ကြောင့် နေ မှာ ပါ ။
F4A December 23, 2012 at 8:08 AM
ကျွန်တော့် c8650က recovery ခေါ်မရတော့လို့ပါ logo မှာရပ်နေပြီး screen ကဖြူဖွေးသွားပါတယ် BATTERYဖြုတ်လိုက်မှ ပြန်တက်ပါတယ် အခုထိသုံးလို့ရနေပေမယ့် recovery ခေါ်မရလို့ root တောင်မလုပ်နိုင်ပါဘူး ကူညီပေးပါဗျာ
Mobile House December 23, 2012 at 9:08 AM
အရင် သွင်း ထား တဲ့ recovery error သို့ မဟုတ် သွင်းတာ အဆင်မပြေ တာဖြစ် နိုင်ပါတယ် ။ဒီ နည်း အတိုင်းသာ သေ ချာ ပြန်လုပ် ကြည့် ပါ ကျွှန်တော် တော်တေ်ာ များများ စမ်းပြီး အဆင်ပြေ မှ တင်ထားပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ANDROID HARD-RESET PROJECT V.1 samsung
ANDROID HARD-RESET PROJECT V. 1.0
ရုပ် ကြည့် ပြီး အလကား ဖုန်းပြော ချင်လား
ဖုန်း အလကားပြော massage အလကား ပို့ မယ်
HTC One X: Root, bootloader unlock, and custom rec...